Abaalmarino waaweyn - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Soo Celinta Dhiirrigelinta Mushaharka ：
AKF waxay tixgelisaa hibooyinka sida hantida qaaliga ah ee shirkadda iyo AKF had iyo jeer waxay fiiro gaar ah u yeeshaan koritaanka iyo horumarka shaqaalaha shirkadda. Waxay si nidaamsan u soo bandhigeysaa nidaam horumarineed oo shaqaale cusub oo loo yaqaan "hal sallaan, laba barkadood". "Hal jaranjaro" waxaa loola jeedaa labada wadiiqo ee loogu talagalay horumarinta khadka teknolojiyadda iyo qadka maareynta. "Laba barkadood" waxaa loola jeedaa "khubaro khubaro khubaro ah" iyo "barkad kheyraad ''.
Shirkaddu waxay fulisaa mushahar dhexdhexaad ah iyo mid sare oo ka sarreeya heerka warshadaha caadiga ah ee guud ahaan jagooyinka guud, iyo mushahar sare oo lagu tartamo shaqooyinka muhiimka ah, waxaannu qaadannaa soo-celinta muddada-dheer iyo soo-celinta muddada-gaaban iyo sidoo kale isku-darka kala-duwanaanta soo-celinta lacagta iyo soo-celinta aan lacagta ahayn foom, si ay si mug leh u soo jiitaan hibooyin tayo sare leh si ay naftooda ugu hibeeyaan himilada iyo shaqada shirkadda.
Marka la eego qaybinta, waxaan si aan gabasho lahayn u gaari doonnaa farqiga dakhliga iyadoo loo eegayo natiijooyinka waxqabadka iyo qiimeynta tabaruca si loo hubiyo soo-celinta sare ee kuwa waxqabadka sare leh. Iyada oo ay ku xiran tahay isla waxqabadka, fursaddu waxay u janjeedhaa shaqaalaha leh adeeg dheer, u heellan iyo aqoonsi dhaqameed sare. Marka laga hadlayo hagaajinta mushaaraadka, shirkaddu waxay qaadataa dhiirigelin waqtigeeda ku habboon, waxayna xoojineysaa xiriirka laba-geesoodka ah ee geeddi-socodka, si ay si wax ku ool ah ugu ciyaarto doorka "mushaharka" jarista iyo dhiirigelinta waxqabadka shaqsiyeed.
AKF waxay abaabushay ilo dhiirigalin ah oo dhinacyo badan leh si loogu abaalmariyo shaqsiyaadka iyo kooxaha waxqabad muuqda si loo kiciyo kaqeybgalka shaqaalaha. Habka dhiirrigelinta ah ee shirkadda AKF waa mid ku wajahan waxqabadka isla markaana aan ku lug lahayn sinnaan. Marka loo eego waxqabadka, habka dhiirrigelinta ee shirkadda AKF wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood: dhiirrigelin degdeg ah iyo soo koobis sannadle ah iyo qiimeyn.
Qorshaha Caymiska: shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin caymis bulsheed oo sharci ah, shirkadduna waxay siisaa caymiska ganacsiga shaqaalaheena iyadoo loo eegayo astaamaha boostada. Fasax Mushahar leh: Fasax mushahar leh oo sanadle ah Marka lagu daro ciidaha sharciga ah ee gobolku qeexay, shaqaaluhu waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan fasax sanadle ah oo lacag la qaato iyo naasnuujinta, iyo Fasaxa Aabbanimada Qoraalada qaar waxay ku raaxeystaan ​​fasaxa guriga waqti isku mid ah.
Adeeg bixinta: Siinta adeegyadeena lacag la’aan.
Hoyga Shaqaalaha: bixinta hooy loo qoondeeyo shaqaalaha u baahan iyo bixinta tas-hiilaad nololeed oo ku habboon.
Shaqaalaha ku nool meel ka baxsan shirkadda waxay siin doonaan kaalmooyin hoy ah oo gaar ah iyaga .Qorshe dalxiis: shaqaaluhu waxay ku raaxaystaan ​​hal fursad oo ah dalxiis dalxiis sanad walba.